बम्बल मौरीको जेस्पर अर्थ - नयाँ अपडेट २०२१ - उत्कृष्ट भिडियो
मौरीको जेस्पर बम्बल गर्नुहोस्
Bumblebee jasper वा bumble माहुरीको ढु stone्गा अर्थ र क्रिस्टल उपचार गुण लाभ। बम्बल माहुरी ज्यास्पर ढु stone्गा प्रायजसो गहनाहरूमा औंठी, मोती, झुम्का, पेंडन्ट, हार, र रूखको रूपमा प्रयोग हुन्छ।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक बम्बल मौरीको जेस्पर किन्नुहोस्
यो जीवन्त रंगको सुन्तला, पहेंलो, र कालो सामग्री वास्तवमा इन्डोनेसियाली ज्वालामुखी लाभा र तलछटको मिश्रणबाट बनिएको हो। कार्बोनेटले भरिएको चट्टान पहिलो पटक यस टापुमा फेला पर्‍यो Java १ 19905० को दशकमा। सामग्री नरम छ, एक मोहको कठोरता XNUMX वा मुनिको साथ। यस झरझरा चट्टानलाई काटिनु र पोलिश गर्न सजिलो छ। हामी प्राय: ओप्टिकन रालले गुफा भर्छौं।
बम्बल माहुरीको जेस्पर (वा बम्बलबी) वास्तवमा ज्वालामुखी पदार्थ, एन्हाहाइड्रेट, हेमाइट, सल्फर, आर्सेनिक, इत्यादिको संयोजन हो। यो साँचो जास्फर वा एगेटिक हो कि होइन भन्ने बारेमा धेरैले बहस गरेका छ, जसलाई कसै-कसैले भनेका छन। यस ढु stone्गामा भएका सुन्दर ढाँचाले प्राय: भौंरीमा फेला परेको रंगको नक्कल गर्दछ, त्यसैले नाम। पहेंलो रंग सल्फरको उपस्थितिको कारण हो, जुन विषाक्त छ, आर्सेनिक जस्तो छ, त्यसैले सावधानी अपनाउनु पर्छ - ह्यान्डल गरेपछि सधैं आफ्नो हात धुनुहोस्।
बम्बल मौरी जास्पर वास्तवमै ज्यास्पर ढु stone्गा होइन
पहेंलो रंग उच्च सल्फर सामग्री बाट आउँछ
वास्तवमा ज्यास्पर होईन
Bumblebee ज्यास्पर ढु stone्गा अर्थ र क्रिस्टल उपचार गुण लाभ
मौरीको जेस्पर क्रिस्टल अर्थ र उपचार गुणहरू बम्बल गर्नुहोस्
Bumblebee ज्यास्परको हीलिंग गुणहरू के हुन्?
माहुरीको बडबड को बनाइएको हो?
के बुम्बल माहुरीको जास्पर दुर्लभ छ?
के गम्भीर माहुरी यास्पर र ?्ग छ?
बम्बलबी वास्तवमा ज्यास्पर ढु stone्गा होइन तर नाम विभिन्न कारणका लागि अडिएको छ। यस बम्बलबी पत्थरको रंग खनिज र ज्वालामुखी पदार्थको संयोजनबाट आउँदछ। एन्हाहाइड्रेट, हेमाटाइट, सल्फर र आर्सेनिकका साथसाथै अन्य तत्त्वहरूको संयोजन गर्दै, बम्बलबी जेस्पर वास्तवमै एक एगटेट स्टोन हो। ढाँचाहरू अनुपम छन् र यो निश्चित गर्नुहोस् कि कुनै दुई ढु stones्गा एकैनासे छैनन्, जसले बम्बल माहुरी जेस्परलाई सुन्दर ढु setting्गा बनाउँदछ जुन कुनै पनि गहनाको सेटि inमा समावेश छ।
ढु yellow्गामा फेला परेको पहेंलो रंग उच्च सल्फर सामग्रीबाट आउँदछ। यस ढु stone्गाको सौन्दर्यताको बाबजुद पनि, यो ढु stone्गालाई ह्यान्डल गरे पछि आफ्ना हातहरू धुनु राम्रो हुन्छ। सल्फर तपाईंको स्वास्थ्यको लागि खतरनाक हुन सक्छ। टाढाबाट यो ढु jewelry्गाको मजा लिनु राम्रो हुन्छ वा विशेष गहनाबाट जुन तपाईंलाई एक्सपोजरबाट बचाउँछ।
ढु stone्गाको उपस्थिति ज्यास्पर जस्तो देखिन्छ जसले यसको नामकरण समस्या समाधान गर्दैन। यो अद्भुत ढु stone्गा हो र गहनाको स collection्कलनमा अविश्वसनीय थप पनि हो, जुन आकारको ढु stone्गामा होस् वा क्याबमा। हामी यो ढु stone्गा व्यापार र कार्यालयहरू सजाउन पनि प्रयोग गर्दछौं।
यो एक शक्तिशाली पृथ्वी उर्जा ढु stone्गा हो। यो भित्र यसको ज्वालामुखीको ज्वालामुखीको उर्जा उर्जा हुन्छ।
यो एक असामान्य ढु stone्गा हो। यो गठन भएको थियो जहाँ एक ज्वालामुखी पृथ्वीमा खोलियो। यी ढु stones्गाले बिभिन्न र सोलर प्लेक्सस चक्रहरूलाई उत्तेजित गर्दछ।
सोलर प्लेक्सस पनि पावर चक्र हो, र यस क्षेत्रलाई उत्तेजित गरेर यसले तपाईंको व्यक्तिगत शक्तिमा बृद्धि गर्न सक्दछ।
सोलर प्लेक्सस पनि आत्मसम्मानमा जोडदार रूपमा सम्बन्धित छ। यी पत्थरहरू आत्मसम्मान बढाउन सहयोग पुर्‍याइएको छ।
Bumblebee Jasper अर्थ पूर्ण खुशी र आनन्द लाई बढावा दिन्छ। जीवनको साना क्षणहरूको उत्सवलाई प्रोत्साहित गर्दछ। इमानदारी बढावा दिन्छ, विशेष गरी आफैसँग, तपाईंलाई तपाईंको सपनाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
इंडोनेशिया भिडियो देखि बम्बल बी जे जोपर
तपाईंलाई ऊर्जा दिन्छ। पूर्ण खुशी र आनन्द लाई बढावा दिन्छ। जीवनको साना क्षणहरूको उत्सवलाई प्रोत्साहित गर्दछ। इमानदारी बढावा दिन्छ, विशेष गरी आफैसँग। तपाईंलाई तपाईंको सपनाहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। फ्रिहरू शरीरबाट ऊर्जा अवरुद्ध। मानसिक गतिविधि उत्तेजित गर्दछ। एलर्जी को लक्षणहरु लाई कम गर्दछ।
व्यापार नाम। रंगीन रेशेदार क्याल्साइटको लागि व्यापार नाम माउन्ट पापानयान, पश्चिम जाभा, इन्डोनेशियामा भेटियो। सामग्री एक विशिष्ट पहेंलो, सुन्तला र कालो ब्यान्डिंगको साथ रेडियली रूपमा विकसित रेशेनी क्याल्साइटबाट बनेको हुन्छ।
बम्बलबी क्रिस्टल एकदम दुर्लभ क्रिस्टल हो जिप्सम, सल्फर र हेमेटाइटले बनेको। यो प्राप्त गर्न गाह्रो र खतरनाक छ किनभने खदान इन्डोनेसियामा एक सक्रिय ज्वालामुखी भित्र अवस्थित छ।
यो रंगीन छैन। पहेंलो रंग सल्फरको उपस्थितिको कारण हो
हाम्रो रत्नको पसलमा बिक्रीको लागि प्राकृतिक बम्बल मौरीको जेस्पर
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्टहरू ... को रूपमा हामी अनुकूलन बनाईएको बम्बल माहुरी ज्यास्पर गहना बनाउँछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।
बम्बल माहुरी जेस्पर १.12.89..XNUMX सीटी
बम्बल माहुरी जेस्पर १.15.47..XNUMX सीटी
बम्बल माहुरी जेस्पर १.13.25..XNUMX सीटी
बम्बल माहुरी जेस्पर १.14.26..XNUMX सीटी
बम्बल माहुरी जेस्पर १.12.82..XNUMX सीटी
बम्बल माहुरी जेस्पर १.11.44..XNUMX सीटी
बम्बल माहुरी जेस्पर १.15.25..XNUMX सीटी